Pharmy Kwurula Mobile Robot - Imewe Mmewe
Kwurula Mobile Robot
Kwurula Mobile Robot Igwefoto ịnya ụgbọ ala maka akpa ahụhụ ụlọ ọgwụ. Ọ bụ usoro ọrụ ngwaahịa iji rụọ ọrụ nnweta ọfụma, belata ohere ndị ọrụ ahụ ike ga-ekpughe ịrịa ọrịa, igbochi ọrịa oria n’etiti ndị ọrụ ụlọ ọgwụ na ndị ọrịa (COVID-19 ma ọ bụ H1N1). Nhazi ahụ na-enyere aka ibute nnweta n'ụlọ ọgwụ na ịnweta nnweta na nchekwa dị mfe, na-eji ntinye ọrụ na-enweghị mgbagha site na teknụzụ enyi. Thelọ robotic nwere ikike ịkwaga nke ọma n'ime gburugburu ebe obibi ma nwee mmegharị na mpaghara ndị ọzọ yiri ya, na-enwe ike ịrụ ọrụ otu egwuregwu robot.
Aha oru ngo : Pharmy, Aha ndị na-emepụta ya : Arbo Design, Aha onye ahịa : ARBO design.
Robotics, automaton na imewe akpaaka
Kwurula Mobile Robot Arbo Design Pharmy